Banyere Anyị - Ningbo Tingxuan Ọdụdọ Ọdụdọ Co., Ltd.
Ntuzi ntutu ntutu
Ningbo tinx Ọdụdọ Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke ntutu straighteners, ntutu curlers na ntutu ịgbatị brushes. Ọ dị na Ningbo, obodo na-emeghe ọdụ ụgbọ mmiri na njem dị mfe. N'ime ọtụtụ afọ na ike ike dị ike, ogo na ngwaahịa tozuru etozu, sistemụ ọrụ zuru oke, enwetala mmepe ngwa ngwa, ihe ngosipụta nke ngwa ahịa ya na nsonaazụ nke imirikiti Ndị ọrụ gosipụtara nke ọma na otu olu na nnweta na asambodo ngwaahịa dị mma, abụrụla ụlọ ọrụ ama ama na ụlọ ọrụ ngwaahịa ntutu.
Ningbo nwere uru nke ndị na-eweta ngwaahịa China na mma nke azụmahịa mba ụwa. Dị ka obodo a, Tinx Electrical bụ nwata ma jupụta n'ike. Site na teknụzụ ya dị elu, ọ mepụtara ọtụtụ ngwaahịa dị elu iji gboo mkpa nke ọha mmadụ taa na mmepe nke mkpa ndị ahịa iji nyere gị aka mepee ụwa ọhụrụ na-akpali akpali nke enweghị njedebe.
Tinx Ọdụdọ nwere a development otu na ngwaahịa aghụghọ na mmepe n'ihi na ihe karịrị afọ iri. Ọ na-ehichapụ ngwaahịa dị iche iche maka ndị ahịa ma nye ndị injinia "otu nkwụsị". N'otu oge ahụ, anyị na-arụkwa ọrụ OEM / ODM dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. A na-ere ngwaahịa anyị n'ọtụtụ ụwa. Ngwaahịa anyị bụ ndị isi na ụlọ ọrụ.
Iji mezuo mkpa nke ndị ahịa na njikwa nke ụlọ, Tinx Electrical emejuputala ma nyefee ISO9001: usoro njikwa njikwa mma na ISO14001: usoro njikwa gburugburu ebe obibi. N'otu oge ahụ, dị ka onye na-eweta Philips, ebe ọ bụ na 2011. N'ihe banyere nchebe gburugburu ebe obibi na nchekwa, Anyị na-etinye aka n'ịmepụta ngwaahịa na gburugburu ebe obibi dị mma na nchekwa. Ka ọ dị ugbu a, ngwaahịa anyị niile na-eme ihe ROHS na CE chọrọ.
N'ọdịnihu, ụlọ ọrụ ahụ ga-anọgide na-enye egwuregwu zuru oke na uru ya, na-agbaso ụkpụrụ nke "na-eduga na sayensị na teknụzụ, na-eje ozi n'ahịa, na-emeso ndị mmadụ iguzosi ike n'ezi ihe ma na-agbaso izu okè" na nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ nke "ngwaahịa bụ ndị mmadụ ", na-aga n'ihu na-emepụta teknụzụ nke teknụzụ, ihe ọhụrụ akụrụngwa, ọrụ ọhụụ na usoro njikwa ihe ọhụụ, ma na-aga n'ihu na-azụlite ngwaahịa ndị na-abaghị uru iji gboo mkpa nke mmepe n'ọdịnihu. Site na ihe ọhụrụ iji nọgide na-azụlite ngwaahịa ndị na-efu ọnụ iji gboo mkpa nke mmepe n'ọdịnihu, ngwa ngwa nye ndị ahịa ngwaahịa dị elu, ngwaahịa dị ọnụ ala bụ nchụso anyị na-adịghị akwụsị akwụsị nke ihe mgbaru ọsọ ahụ.
Jikọọ aka na Tinx iji mepụta ọdịnihu ka mma ...
STSGZ2008263137 - RoHS 2.0 Asambodo
Adreesị: No.2, Huasheng Road, Dazhang Industrial Park, Xikou Town, Fenghua, Ningbo City, Zhejiang Province, China